महासंघ निर्वाचन र नेतृत्व चयन : सुबोधकुमार गुप्ता « गोर्खा आवाज
महासंघ निर्वाचन र नेतृत्व चयन : सुबोधकुमार गुप्ता
नेपालको निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ हो भनेर सायदै भनि रहनु नपर्ला । किनकी, महासंघको संजाल राष्ट्रव्यापी रुपमा फैलिएको छ । र त्यो भन्दा पनि ठुलो कुरा हाम्रो अर्थात महासंघको संजाल नेपाल सरकार पछि सबै भन्दा ठुलो छ ।अर्थात भनौ संजालका हिसाबले, सदस्य संख्या भनौ वा मानव आवद्धताका हिसाबले हाम्रो संगठन दोस्रो स्थानमा छ । त्यसैले हाम्रो संगठन उपस्थितीगत र पहिचानको हिसाबले निकै अगाडी छ ।
महासंघ साना, मझौला र ठुला व्यवसायी एवम् उद्योगपतिहरु अर्थात निजी लगानीमा व्यापार व्यवसाय गर्ने वा कलकारखाना चलाउनेहरु सबैको साझा संगठन हो । हामी ग्रामीण दुरदराज देखी शहरोन्मुख नगर क्षेत्र र ठुला शहरसम्म फैलिएर रहेका छौ । सामान्य व्यापार गर्ने देखी दैनिक करोडौमा कारोबार गर्ने कारोबारीहरुलाई महासंघले छहारी दिईरहेको छ । निजी क्षेत्रको साझा धारणा महासंघले बोल्छ, बोल्नु पर्छ ।
राज्यले निजी क्षेत्रको धारणा बुझ्नुपर्‍यो भने पहिलो गुहार लगाउनु पर्ने भनेकै महासंघलाई नै हो, कुटनितिक नियोग देखी लिएर नियोगहरु, स्वदेशी एवम् विदेशी संघ संस्था वा व्यक्तीले निजी क्षेत्रको अवस्था बुझ्नु पर्दा र हातेमालो गर्नु पर्दा यही महासंघमा ठोक्किनु पर्छ । अर्थात महासंघ सर्वव्यापी पनि छ भन्ने हो । छ पनि त्यस्तै हामी सरकारमा हुन्छौ, सडकमा हुन्छौ, सदनमा हुन्छौ, घर, चौतारा, पाटीपौवा, चिया पसल, फ्याक्ट्री, पसल जताततै हुन्छौ । गास, बास अनि कपास सर्वत्र हामी छौ । यस मानेमा निजी क्षेत्र देशको महत्वपूर्ण हिस्सा हो ।
देशको व्यवस्था र राज्य भित्र लागु हुने निती नियम कानुन आदीको अधिनमा रहने हुँदा सिमितता र असिमितताको दायरामा तल माथि हुन सक्ला तर हामी फेरि पनि कही न कही अवश्य हुन्छौ । दायित्व पनिसँगै जोडिन्छ तर अधिकार पनि छ हाम्रो । तर हामीले हाम्रो दायित्वलाई पुरा गर्दै गर्दा के हामीले हाम्रो अधिकारलाई निर्वाध रुपमा उपयोग गर्न पाएका छौ त ? कदापी छैन । हामी लगाम लगाएको घोडा झै नियमको परिधीमा बसेर आफ्नो पेशा गर्छौ, रात विहान नभनी कुदछौ, कर तिर्छौ, रोजगारी सिर्जना, अर्थतन्त्र चलायमान गराउछौ ।
अझ ठुलो कुरा आफ्नो भविस्य दाउमा लगाएर ठुलो जोखिम उठाउछौ । हामीले पनि पाक्दै गरेको खाना छाडेर, मध्यरातमा पनि सुतिरहेको बिस्तारा छाडेर, घर परिवारलाई दिनुपर्ने समय काटेर काममा नै तल्लिन हुन्छौ । आखिर त्यो हामीले के का लागि र किन गरिरहेका छौ ? किन गर्दै आएका छौ ? हामीले आँफै स्वयम् पनि बुझ्नु पर्छ र अरु सबैलाई बुझाउन सक्नुपर्छ । हामीले गर्दै आएको पेशाले हामी मात्रै होईन सिंगो मुलुकको विकासमा योगदान पुगेको छ । तर पनि हामी किन राज्यबाट उपेक्षामा छौ, यसको समिक्षा गर्न आवश्यक छ ।
हामीसँग अपवाद वाहेक सबै चिज छ- बल, बुद्धी, विवेक, स्रोत छ, साधन छ हर चिज छ तर पनि हामी कुईराको काग झै बन्नु परेको छ । हामी बादल भित्रै हराई रहेका छौ । हामीले यसो भनि रहँदा हामी कहाँ नेर चुकिरहेका छौ त, हामीले त्यो बुझ्न, पहिचान गर्न जरुरी छ । मेरो ब्रम्ह, विचारले हामीले सत्ता र सदनमा जानेहरुलाई निजी क्षेत्रको महत्व नै बुझाउन सकेनौ, हामीले उनीहरुसँग हाक्काहाक्की कुरा राख्नै सकेनौ, निजी क्षेत्रको महत्वबोध गराउनमा चुकिरहयौ । हो कुरा त पुर्यायौ होला तर पनि हाम्रो कुरालाई जायज मान्न सक्ने वातावरण तयार पार्नै सकेनौ ।
यसो हुनुको पछाडी पक्कै पनि हाम्रा कमी कमजोरीहरु छन् । यस मानेमा विगतलाई केलाउदै समिक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।र निजी क्षेत्रलाई सहि गति दिन सक्ने करिज्मा बोकेको लिडर छनौट गर्न तर्फ हामी केन्द्रित हुनु पर्छ भन्ने मान्यता मेरो छ । म मेरा अग्रजलाई सम्मान गर्छु, उहाँहरु अनुभवका खानि हुनुहुन्छ, यद्यपी विगतका कमी कमजोरीको समिक्षाले महासंघलाई अघि बढन ठुलो मद्धत मिल्ने मेरो विश्वास छ । मैले देख्दा मुल नेतृत्वमा बस्नेहरुमा लिडरशिपको अभाव देखिनु हुँदैन । नेपालको निजी क्षेत्रका मुद्धाको सुनुवाइ हुने वातावरण तयार पार्ने दायित्व पनि हाम्रै हो ।
साना तिना एजेण्डामा रुमल्लिने र आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थका लागि महासंघलाई भर्याङ बनाउने प्रब्रित्तीबाट हामीहरु टाढै बस्नुपर्छ । विगतमा जे भए भए, अब भने हामीले महासंघलाई नयाँ शिराबाट अगाडी बढाउनै पर्छ । दुरगामी सोच बोकेर सार्थक पाईला चाल्न अब कम्मर कसेर लाग्नु पर्छ । कोभिडबाट सिर्जित बिषमता माझ धेरै साथीहरु आहतमा हुनुहुन्छ । उहाँहरुको पिडा, रोदन आदीलाई राज्य स्तरबाट सम्बोधन गर्नलाई महासंघले नेतृत्व लिनुपर्छ । यो दायित्वबाट महासंघ विमुख हुनु हुँदैन ।
हामीले निजी क्षेत्रका तमाम समस्याहरुलाई हल गर्ने गरि आफु सक्य प्रयास जारी राख्नु पर्छ । यसका लागि आफ्नो व्यवसायलाई भन्दा पनि महासंघलाई माया गर्ने, संगठन भित्र लोकप्रिय र राज्यस्तरमा नीति निर्माताहरुसँग सहजै पहुँच राख्न सक्ने नेतृत्व हामीलाई चाहिन्छ । हाम्रा साझा मुद्धालाई बोकेर हिडने र अहोरात्र खटिने निर्भिक नेतृत्व नै हाम्रो आजको आवश्यकता हो । भोलीको लागि पनि हामीले सोच्नुपर्छ । महासंघलाई दिशाबोध गर्न सक्ने करिज्मा बोकेका व्यक्ति बिशेषलाई पहिचान गरि स्व विवेकले अमुल्य मत जायर गर्ने अवसरबाट हामी चुक्नु हुँदैन । यो हाम्रो साझा धारणा बन्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाई छ ।
यता उपाध्यक्ष तर्फका उम्मेदवारहरु उस्तै उम्दा हुनुहुन्छ । उमेशलाल श्रेष्ठ, गुणनिधी तिवारी र रामचन्द्र साँघाईमा वेजोडको इच्छा शक्ती र संगठन भित्र टिम स्प्रिटमा काम गर्न सक्ने खुवी म देख्छु । मैले वस्तुगत तर्फबाट उम्मेदवारी दिएकाले उमेशलाल श्रेष्ठको बारेमा केही उल्लेख गर्न मनाशिव हुने ठानेको छु । पहिलो कुरा त उहाँको पहुँच निकै माथिसम्म छ । महासंघमा उहाँ जादा उहाँको राजनितिक पहुँचले विगतमा पनि काम गरेको अनुभव हामीसँग छ ।
बग्रेल्ती घटना छन् त्यस्ता । उल्लेख गरेर साध्य छैन । चाहे स्वदेशी डेरी उद्यो गलाई संरक्षण गर्ने कार्य होस् वा निर्यातका सवाल वा गएको मौद्रिक नितीमा निजी क्षेत्रका समस्यालाई सम्बोधन गर्न लगाउने कुरा उहाँको साथ महासंघले सधैं पाउदै आएको छ । उहाँ निर्भिक, स्वतन्त्र, अटल र हक्की स्वभावका हुनुहुन्छ । कसै प्रति आग्रह पुर्वाग्रह नगर्ने उहाँको बानी छ । शायद राजनितीमा त्यही भएर पनि नजानु भएको होला ।
महान नेता स्व. पुष्पलाल एवम् अग्रज नेतृ स्व. सहाना प्रधानका सुपुत्र भएता पनि उहाँमा कत्ति घमण्ड छैन । कुर्सी मोह छैन । उहाँले आफ्नै बलबुताले कम्पनी खडा गरि सानो उद्योगलाई ठुलो बनाउन मै मेहनत गर्नुभयो ।उहाँ भावी अध्यक्ष बन्ने हैसियत र क्षमता राख्नु हुन्छ । अन्य धेरै गुण उहाँमा छ । उहाँ महासंघको तागत हो । त्यसैले उहाँ निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता शायद हामी धेरैमा छ ।
८ बर्षे छोरालाई जिउँदै गाडेको आरोपमा बाबु पक्राउ